ဟိုတစ်ပတ်က မိန်းမကရာဇသံပေးတယ်။ ရှင့် ချစ်ချစ် (ချစ်ချစ်လို့တောင် ခေါ်ဖို့ထိုက်တန်ရဲ့လား မသိ သူယုတ်မာခဲ့တာတွေကြောင့်) ပေးထားတာတွေ ကုန်အောင်သုံး သိမ်းထားမနေနဲ့တော့တဲ့။ စိတ်မရှည်ရင် ကလေး ချီးကုန်းတဲ့ အခါ သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ ကြောက်ကြောက်နဲ့ သုံးလိုက်ပါပီ။
Posted by ပေတူး at 6:38 PM No comments:
တစ်ခါတလေတော့လည်း ကိုယ်ကိုကိုယ် အားမရဘူး။ တစ်ခါတလေတော့ လည်း လုပ်ချင်တာတွေ အရမ်းများနေတယ်။ တစ်ခါတလေတော့လည်း ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူး။
ငယ်ငယ်တုန်းက အင်္ဂလိပ်စာကို သေသေချာချာ မသင်ခဲ့တဲ့ အတွက် ကိုယ်ကိုကိုယ်နောင်တရနေမိတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက မြန်မာဂီတ အခြေခံကို မသင်ခဲ့တဲ့အတွက် ကိုယ်ကိုကိုယ်နောင်တရနေမိတယ်။
တစ်ခါတလေတော့လည်း သူများတွေလို အလုပ်ထွက် တရားစခန်းလေး ဘာလေးဝင်.. ဟိုနိုင်ငံ ဒီနိုင်ငံလျှောက်လည် နိုင်ရင်ကောင်းမလား။ သူတို့ကတော့ အလုပ်ထွက်နိုင် လျှောက်လည် နိုင်တာပေါလေ။ စင်္ကာပူ နိုင်ငံသား တစ်ဝက်ကိုး။။။ ဘာဂရုစိုက်စရာလဲနော်။။။
Posted by ပေတူး at 9:33 AM No comments:
ခုတလော ကြွက်တစ်ကောင်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်။ ဘာလို့ဆို. သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ အားပြိုင်နေတာ။ ခုတောင် တော်တော်လေး ခရီရောက်နေပြီ။ တစ်ခါတစ်ခါ သူက လက်ဦးသွားသလို တစ်ခါတစ်ခါတော့ ကိုယ်ထောင်ချောက်ထဲကို သူရောက်သွားတယ်။
အဲဒီကြွက်က အကောင်သာသေးပေမဲ့ ပရိယာယ်ကြွယ်သား။ ကိုယ့်မှာ သူ့ကို ပညာပေးဖို့ ဘယ်လိုအကွက်ရွှေ့ရမလဲလို့ စဉ်းစားနေရတယ်။ တစ်ခါတလေ သူကို ပိတ်မိစေဖို့ အကွက်ဆင်ရသလို တစ်ခါတခါတော့ ကိုယ်ရဲ့နယ်မြေကို ကိုယ်ကာကွယ်ရတယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျတော် ဒီတစ်ပတ်အတွင်း CatchaMouse ဂိမ်းလေးနဲ့ နပန်းလုံးနေတယ်လေ။ တစ်ခါတလေ ခင်ဗျားကို လက်ခုပ်တီးအားပေးတဲ့ ပရိသတ်ရဲ့ အသံကို ကြားလို့ အာတက်နိုင်သလို ကြွက်ကလေးရဲ့ အော်သံလေးကိုလည်း ကြားနိုင်ပါတယ်။
လိုချင်ရင်တော့ Mediafire လင့်မှာဒေါင်းပါ၊ Jailbroken အိုင်ဖုန်းတွေ အတွက်ပါ။
Posted by ပေတူး at 1:30 AM 1 comment:
Iphone Restriction Passcode Reset
ဟိုတစ်နေ့က ကျတော့ ညီအတွက် iphone တစ်လုံးဝယ်ပေးလိုက်တယ်။ အသစ်မဟုတ်ဘူးဗျ။ second လေးပါ။ 3GS ၃၂ဂစ် ကို ၇၀၀ ပေးရတယ်။ တန်တယ်လို့ပြောရမလားပဲ။
ဒါနဲ့ပါလာတဲ့ data တွေကို အလွယ်ဆုံး ဖျတ်ဖို့ Reset all settings ကနေဖြတ်မယ်ပေါ့။ Setting တွေကို Reset လုပ်မယ်လုပ်တော့ Restriction passcode တောင်းနေတယ်။ ဒါနဲ့ အရင် ဖုန်းပိုင်ရှင်ကို ပြန်မေးတော့ သူဘာမှမလုပ်ပါဘူးတဲ့။ ဒါဆို passcode ကိုပြုတ်အောင် ဘယ်လို လုပ်၇မလဲ လိုက်မွှေရှာကြည့်တော့ နည်းလမ်းတွေ့တယ်ဗျ။ ဖုန်းထဲက /var/mobile/library/preferences/ ကိုဝင် "com.apple.springboard.plist” ကို ဖျတ်လိုက်ရင် အိုကေမယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ ဒီကောင်ကို ဝင်ဖို့တော့ နည်း အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ winscp424 ဝင်ချင်ဝင်. ဒါမှမဟုတ် iphone application suite နဲ့လဲ ရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ifile ကနေဝင်ချင်ဝင်.. ဒါတွေ သုံးဖို့ ဖုန်းကတော့ jailbroken ဖြစ်ရပါမယ်။
ကျတော်ကတော့ ifile ကနေဝင်ပြီး ဖြတ်ချလိုက်တယ်။ တစ်ချို့ကတော့ အဲဒီထဲက ဒေတာတွေကို ဝင်ပြင်ရင် အဲဒီဖိုင်ကို ဖြတ်စရာမလိုဘူးဆိုပဲဗျ။ "com.apple.springboard.plist” ဖြတ်လိုက်တော့ ဖုန်းထဲမှာ သွင်းထားတဲ့ app တွေကို alphabetically ပြန်စီသွားတယ်။ winterboard setting ပြန်ချိန်ပေးရမယ်။ keyboard setting တွေ ပြန်ချိန်ပေး၇မယ်။ ဒါက တော့ အားနည်းချက်ပဲ။
Posted by ပေတူး at 8:18 AM No comments:
ကိုသားကြီး (ဒွေး) ကိုသတိရတယ် ပြီးတော့ မချိပြုံးလေးတွေနဲ့ပေါ့
ဒီနေ့ သောကြာနေ့။ ထုံစံအတိုင်း ပင်နစူလာကို ညနေဘက် အစဉ်အလာ မပျက် ချီတက်ကြတယ်။ အရင်က ပုံမှန်သွားနေကျ ct hall mrt အိမ်သာဘက်လမ်းကို မရွေးပဲ.. ဟိုတုန်းက တစ်ယောက်သောသူကို စောင့်နေကျ raffle ဘက်အခြမ်းကနေထွက်လာခဲ့မိတယ်။ အရင်က ကြာသပတေးဆို ထိုင်စောင့်နေကျ လှေကားထစ် နေရာလေးကို မျက်စပစ်ကြည့်မိသေးတယ်။ ကိုယ်ဟာကို မချိပြုံးလေးနဲ့ပေါ.။
ရုံးက ၁၅ မိနစ်လောက် စောထွက်လာမိတော့ သယ်ရင်းကို စောင့်နေ၇တယ်။ ပင်နစူလာ posb ဘဏ်ဘေး လှေကားနားမှာ မတ်တပ်ရပ်ရင်းပေါ့။ ထည့်မယ် မှန်းထားတဲ့ quick cheque မထည့်နိုင်ဘူး။ မီးမလာလို့တဲ့။ ဂွိ။ ဘဝဟောင်းတုန်းက တော်တော်ခင်တဲ့ ဘလော်ဂါ ကြီးက လာနှုတ်ဆက်တယ်။ ကိုယ်က အိုင်ဖုန်းနဲ့ ဂိမ်းကို အသဲအသန် ကစားနေတော့ သူကို သတိမထားမိဘူး။ သူနဲ့တော့ အခု အသစ်ထွက် ios4အကြောင်း.. jailbreakme အကြောင်း အာလူးဖုတ်တာပေါ့ဗျာ။ သူကိုတွေတော့ တစ်ယောက်သောသူကို အမှတ်တရ ပြန်တယ်။ ကိုယ်ဟာကို မချိပြုံးလေးနဲ့ပေါ.။
ထမင်းစားတော့ စားနေကျ ဆိုင်မှာ။ လူများတော့ နေရာမနည်းယူရတယ်။ ဒန်ပေါက်စားမယ် ဆိုပြီး မှာတော့ ဒန်ပေါက်က ကုန်ပီတဲ့။ ဘာပဲပြောပြော အဲဒီဆိုင်က ဒန်ပေါက်က စလုံးမှာ စားဖူးသမျှ အကောင်းဆုံးပဲ။ ရောက်ရင် စားကြည့်။ ဒါနဲ့ ကြေးအိုးဆီချက် မှာတယ်။ သယ်ရင်းတွေကတော့ ထမင်းစားကျတယ်။ အသားဟင်းတစ်ခွက် အရွက်ကြော်တစ်ပွဲ ၅ကျပ်တဲ့။ အသားတစ်ခွက် အရွက်ကြော် တစ်ပွဲ အသုပ်တစ်ပွဲ ၅ကျပ် ၄၀ပြား။ ဈေးများတယ် မများဘူး ဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။ food court မှာစားရင် ၃ကျပ်ခွဲဆို ဘောင်းလန်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာလေ မျိုးချစ်စိတ် အပြည့်နဲ့ မြန်မာ ဆိုင်မှာပဲ စားတယ်။ ကြေးအိုးဆီချက်ရောက်လာတယ်။ ခါတိုင်းလောက် စားမကောင်းဘူး။ ဖြစ်သလိုလေး။ အရွက်မပါဘူး။ ဘာပဲပြောပြော ကိုသားကြီး(ဒွေး) ကို သတိရတယ်။ ကိုသားကြီး ကျေးဇူးတွေလေ။ ကိုသားကြီး ကျေးဇူးတွေလေ။ ကိုယ်ဟာကို မချိပြုံးလေးနဲ့ပေါ.။
စားသောက်ပီး ဝယ်စရာတွေ ဝယ်ပြီး ဒူရင်းသီးဘက် Merlion ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ အရင်က ကြာသပတေးနေတိုင်း ထိုင်နေကျ starbuck ကိုရောက်တယ်။ အရင်လိုပဲ ကော်ဖီ မသောက် ချောကလက် မစ်ရှိတ်သောက်တယ်။ အဲဒီရောက်တော့ အရင်ဘဝနေ့ရက်တွေကို သတိရသား။ ကိုယ်ဟာကို မချိပြုံးလေးနဲ့ပေါ.။
ဘာပဲပြောပြော ဒီအပတ် သောကြာနေ့ ကိုသားကြီး ကို သတိရတယ်။ ပြီးတော့ မချိပြုံးလေးနဲ့ပေါ့။
Posted by ပေတူး at 1:08 AM No comments:
itunes top songs for July
myanmarmp3album.com မှာ ပေတူး တင်ထားတဲ့ July top songs တွေကို ဒီမှာ အမှတ်တရအနေနဲ့ လင့်တွေ ပြန်တင်ထားတာပါ။
Posted by ပေတူး at 8:05 AM No comments: